June 11, 2021 - ApannPyay Media
June 11, 2021 by ApannPyay Media
သွေးကင်ဆာရောဂါလက်တွေ့ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ ပဲခူးတိုင်း သာယာဝတီမှဦးအောင်သိန်း “သွေးကင်ဆာပျောက် နာနတ်ရေသောက်” …..ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီမှ ဦးအောင်သိန်းဟာ သွေးကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ဆရာဝန်ဆီကနေ ကြားရပြီးကတည်းက မိမိကိုယ်ကို သေလူဖြစ်ပြီဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျသွားပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သွေးကင်ဆာပျောက်အောင်ကုသရန် ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်ပါပဲ စိတ်ဓါတ်ကျသွားသည့်အတွက် လူကလည်းတစ်နေ့တစ်ခြား ပိန်ချုံးလာပါတော့တယ်။ မိတ်ဆွေများက စိတ်ဓါတ်မကျဖို့ ဝိုင်းဝန်းဖြောင်းဖျပေးကြပါတယ် တစ်နေ့မှာ မြို့ကိုကြွလာတဲ့ အာဂန္တုဆရာတော်တစ်ပါးမှ တိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြင့် ကုသဖို့ဆေးနည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်သိန်း လည်း ၎င်းဆေးနည်းကို ယုံကြည်စွာသောက်သုံးခဲ့သည့်အတွက် သွေးကင်ဆာရောဂါဟာ မယုံကြည်နိုင်အောင်ပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့ ဝမ်းချုပ်၊ ဝမ်းအောင့်၊ လေနာ၊ ဝမ်းဖော စသည့်ရောဂါများလည်း ပျောက်ကင်းသွားပြီး ပြန်လည်ကျန်းမာဝဖြိုးလာပါတော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆေးနည်းကို အများသိအောင် မျှဝေပေးလို၍ မိတ်ဆွေများကိုလည်း မကြာခဏ ညွန်ကြားပေေးနပါတယ်။ အနာနဲ့ဆေး တည့်သွား၍ ပျောက်ကင်းသွားသောဝေဒနာရှင်အမြောက်အများ ရှိနေပါပြီ။ ဆေးနည်း … Read more
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါပိုးများကာကွယ်ဖို့ ၁၅မိနစ်ပဲ အချိန်ပေးလိုက်ပါ အသက်ရူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါပိုးများကို၁၅မိနစ်နစ်အတွင်း ချက်ချင်းသက်သာပြီး ပိုးကအဆုတ်ထဲ အထိ ရောက်သော အဆင့်ရင်ဘတ်အောင့်သော အဆင့် ထက်ကျော်ပြီး အသက်ရူလိုက်ရင် ဆန်ပြုတ်အိုးပွက် သလို အသံထွက်နေရင်တောင် ၃ရက်နှင့်ပျောက်ပါသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ အရမ်းလွယ်ပြီး ၁၅မီးနစ်အတွင်း ကိုယ်တိုင် သက်သာ သွားသည်ကို လက်တွေ့သိရှိ နိုင်ပါသည်။ ဆေးနည်း ၁။ အချင်း၂လက်မခန့်ရှိ ကြက်သွန်နီဥကြီး တလုံးကို အခွန်ခွာ အလုံးလိုက်ရေဆေးပြီး ခပ်ကြီးကြီးကိုက်ပြီး ဝါးလိုက်ပါ ချက်ခြင်းမျို မချလိုက် ပါနဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ဝါးနေစဉ် မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ထွက်လာသော အခိုးကို ပါးစပ်မှအဆုတ်ထဲကို အဆုတ်ပြည့်အောင် စုတ်သွင်း လိုက်ပြီး၂စက္ကန့်၃ စက္ကန့်ခန့် အသက်ရူအောင့်ထားပါ။ ပြီးရင်ပါးစပ် ပိတ်လျှက် ဖြေးညှင်းစွာ နှာခေါင်းမှ ပြန်ထုတ်ပါ။ ပါးစပ်ထဲတွင် … Read more
အသည်းကို သန့်စင်ပေးဖို့အတွက် ဒီအစားအစာလေးတွေ စားသုံးပေးပါ
အသည်းကို သန့်စင်ပေးဖို့အတွက် ဒီအစားအစာလေးတွေ စားသုံးပေးပါ အသည်းကင်ဆာကလည်း ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းမှာ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်က အလဟဿတင်ကျန်နေတဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ပါပဲ။ အသည်းဟာ သွေးအတွင်းက ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိုတ်တွေကို ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့၊ သွေးကနေ အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားဖို့၊ အင်ဇိုင်းဓာတ်တွေ လှုပ်ရှားလာဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးကြီးတဲ့အသည်းကို အဆိပ်အတောက်တွေ သန့်စင်ဖို့ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အစားအစာရှိပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာမဖြစ်အောင် အသည်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်များတဲ့အစားအစာများသင် တစ်နေ့တာစားတဲ့အစားအစာမှာ အမျှင်ဓာတ်ပိုပါဝင်မယ်ဆိုရင် သင့်အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အသည်းထဲမှာတင်ကျန်နေတဲ့ သကြားပမာဏကို ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာကူညီပေးတဲ့ အမျှင်ဓာတ်များတဲ့အစားအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ လက်ဖက်စိမ်းရေနွေးကြမ်း လက်ဖက်စိမ်းရေနွေးကြမ်းသောက်ပေးတာကလည်း များစွာသော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်နေတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ။ … Read more
ဆီးချိုရောဂါ အတွက် အစွမ်းထက်ပြီး အရမ်းထိရောက်တဲ့ ကြက်သံပုရာပေါင်း ဆေးနည်း
ဆီးချိုရောဂါ အတွက် အစွမ်းထက်ပြီး အရမ်းထိရောက်တဲ့ ကြက်သံပုရာပေါင်း ဆေး နည်း ဆီးချိုရောဂါ သည်တွေ အတွက် ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူတွေ ဆီက ဓာတ်စာ ဆေး နည်းကို တဆင့်ပြန်လည် ဖောက်သည်ချ လိုက်ပါရစေ။ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ လက္ခဏာများ ဆီးချိုရောဂါ သည်တွေ အနေနဲ့ ဆီးချို တိုင်းတာပြီး ဆီးချို အမှတ် အရမ်းတက်နေတယ်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့် အစားအသောက် ဆေးနည်းတမျိုးပါ။ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် ကြက်သား ၁၀ ကျပ်သားကို ဆားနဲ့ နနွင်း နယ်ပြီး ( ကျန်တာ ဘာဆို ဘာမျှ မထည့်ရ) သံပုရာသီး စစ်စစ်တလုံး( မခွဲမစိပ်ပဲ သဘာဝ အလုံးအတိုင်း ) နဲ့ အတူ ရောပြီး ပေါင်းရပါမယ်။ အကယ်၍ ကြက်သား … Read more
ချောင်းဆိုးတတ်တဲ့ သားသားမီးမီးတို့အတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက် မွေးစကနေ ခြောက်လအတွင်း ချောင်းခြောက်ဆိုးနေပြီး နေရခက်နေတဲ့ သားသားမီးမီး အတွက် အကောင်းဆုံး ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကတော့ မိခင်နို့ပါတဲ့။ မိခင်နို့လည်းတိုက်၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးလည်း တိုက်သလို ချစ်စရာ့ အရွယ်လေးတွေရဲ့ အသက်အပိုင်း အခြားအလိုက် မိမိဘာသာ အလွယ်တကူ ဖော်စပ်လို့ရတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက် အစွမ်းထက် အိမ်တွင်းဆေးဝါးလေးတွေအကြောင်းလည်း သိရလေအောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး တင်ပြပေး လိုက် ပါတယ် မေမေ၊ ဖေဖေတို့ရေ။- မိခင်နို့ပာာ မချိုလွန်း မပေါ့လွန်း အနေတော်ဖြစ်တဲ့အပြင် အာပာာရဓာတ်ပေါင်းစုံ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချောင်းဆိုးပျောက်စေမယ့် ပဋိပစ္စည်းတွေ ကိုယ်ခံအားတက် စေမယ့် ဓာတ်တွေက လည်း အလျှံပယ် ပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ ချောင်းခြောက်ဆိုးနေလို့ မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးတာကို မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့။-ကြက်သွန်ဖြူကို အခြောက်ခံ ညက်နေအောင် … Read more
ရှေးနှစ်ပေါင်း ၆ဝကျော်ကထုတ်ဝေခဲ့သော ဆရာတော်မြိုင်နံ့သာဆရာတော်ဧ။် ဆေးမစားပဲ အသက်ရှည်နည်း
ရှေးနှစ်ပေါင်း ၆ဝကျော်ကထုတ်ဝေခဲ့သော ဆရာတော်မြိုင်နံ့သာဆရာတော်ဧ။် ဆေးမစားပဲ အသက်ရှည်နည်း ဆေးမစားပဲ အသက်ရှည်နည်း။ ရှေးနှစ်ပေါင်း၆ဝကျော်ကထုတ်ဝေခဲ့သော ဆရာတော်မြိုင်နံ့သာဆရာတော်ဧ။်ဆေးမီးတိုကျမ်းတွင် ဆေးမစားပဲအသက်ရှည်စွာနေလိုပါက အောက်ပါအချက်များကိုအတိအကျလိုက်နာပါဟုဖေါ်ပြထားသည်။ ၁။ အသားစားရှောင်ပါ။ ၂။အသီးအရွက်များများစားပါ။ ၃။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။ ၄။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နံနက်၊ညနေတိုင်း ၁၅မိနစ်ခန့်ပြုလုပ်ပါ။ ၅။ ရရက်တစ်ခါ ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စားပါ။ ၆။ လေကောင်းလေသန့်ရှူပါ။ ၇။ အရက်သေစာရှောင်ပါ။ ၈။ ကာမမကြူးပါနှင့်။ ၉။ နွားနို့ကျက်ကျက် နံနက်၊ည တစ်ခွက်မှန်မှန်သောက်ပါ။ ၁၀။ အစားကိုတစွတ်စွတ်မစားရ။အချိန်မှန်စားပါ။ ၁၁။ ထမင်းကိုဝအောင်မစားဘဲလျှော့စား၍ ရေ။ရေနွေးဝအောင်သောက်ပါ။ ၁၂။ အစာစားပြီးလျှင်နာရီဝက်ခန့်နားပါ။ကိုယ်လက်ပင်ပမ်းစွာလှုပ်ရှားမှုမပြုပါနှင့်။ ၁၃။ ဒေါသစိတ်မပွားပါစေနှင့်။ ၁၄။ တစ်ပါတ်တစ်ခါဝမ်းနှုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာပါကအသက်ရာကျော်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေရပါလိမ့်မည်။ credit -Original Uploader ေရွးႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ကထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ၿမိဳင္နံ႔သာဆရာေတာ္ဧ။္ ေဆးမစားပဲ အသက္ရွည္နည္း ေဆးမစားပဲ အသက္ရွည္နည္း။ … Read more
အိမ်တွင်းဖြစ် ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ကိတ်မုန့်လုပ်နည်း
June 11, 2021 June 11, 2021 by ApannPyay Media
အိမ်တွင်းဖြစ် ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ကိတ်မုန့်လုပ်နည်း အိမ်တွင်းဖြစ် ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ကိတ်မုန့်လုပ်နည်း အိမ်တွင်းဖြစ်ထမင်းပေါင်းအိုးကိတ်မုန့် ပါဝင်ပစ္စည်း ၁.ဂျုံ=ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ခွက် ၂.သကြား=ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ဝက် ၃.နွားနို့= ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ဝက် ၄.ဆီ=ဆန်ချိန်ခွက်၃ပုံတစ်ပုံ ၅.ရှာလကာရည်=၃စက် ၆.ကြက်ဥ=၅လုံး ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ၁.ဇလုံသန့်သန့်၂လုံးအဆင့်သင့်လုပ်ထားပါ၊ကြက်ဥ၅လုံးကို အကာအနှစ်ခွဲပြီးဇလုံတစ်ခုချင်းစီထည့်ထားပါ။ ၂.ကြက်ဥအနှစ်ဇလုံ ထဲကို ဂျုံ၊ဆီ၊နွားနို့ ရောထည့်ပြီး ဂျုံလုံးလေးတွေမရှိအောင်နှယ်ထားပါ။ ၃.cream ရိုက်စက်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် ကြက်ဥအကာဇလုံထဲကိုရှာလကာရည် ထည်ပြီးခေါက်ပါ(သကြားကို၃ပုံခွဲထားပါ)၊အမြုပ်ထွက်လာရင် သကြားကိုတစ်ပုံထည့်ပါ၊ အဆက်မပျက်ခေါက်ပေးရပါမည်၊အမြုပ်လေးတွေသေးပြီးဖြူဖြူလေးတွေဖြစ်ရင် သကြားနောက်တစ်ပုံထည့်ပါ၊အမြုပ်လေးတွေပျောက်ပြီးဖြူဝင်းလာပြီဆိုရင်သကြားနောက်ဆုံးတစ်ပုံထည့်ပြီးဆက်ခေါက်ပါ၊ cream ရသည့်ထိခေါက်ပါ။ Cream ဖြစ်မဖြစ်ကိုဝါးတူတစ်ချောင်းကိုအလယ်မှာစိုက်ကြည့်ပါ လဲမကျရင်cream ရပါပြီ။Cream ရိုက်စက်ရှိရင်လဲ အပေါ်ကအချိုးအတိုင်းပြုလုပ်ရပါတယ်။ creamရိုက်တာ၁ဝမိနစ်ကြာပါတယ် ၄. ရိုက်ထားတဲ့ cream ကို ဂျုံနှယ်ထားတဲ့ဇလုံထဲကို ၃ခါခွဲပြီး ရောနှယ်ပေးပါ (နှယ်တဲ့နေရာမှာ ဇွန်းဖြင့်အပေါ်အောက်ဖြေးဖြေးနှယ်ပါ၊ လုံးဝမမွှေမိပါစေနဲ့နော် ) ၅. ထမင်းပေါင်းအိုးအောက်ခြေကို ဆီသုပ်ထားပါ … Read more
ရေးထားတဲ့စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ ရိုင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့
ရေးထားတဲ့စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ ရိုင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် စိတ်ပါနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်အမျိုးသမီးတွေကိုနားလည်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ တကယ်ရောအဲ့လောက်ခက်လို့လား ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြမယ် အချက် ၁၀ ခ်က္ကေတာ့ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ပါနေတာကို သိနိုင်မယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ ၁. သင့်အနားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေခြင်း များသောအားဖြင့်တော့ သင့်အပေါ်ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေက အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ နဲနဲတော့ ကပြောင်းကပြန်ဆန်တယ် ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလိုသူခံစားလာရရင် ရှက်ရွံ့လာပြီးတော့ သင်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားတတ်တယ် ။ ၂. ရုတ်တရက်လာထိနေခြင်း တစ်ယောက်ယောက်စိတ်ပါနေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုဖြစ်တာက ယေဘုယျအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ ။ သူစိတ်ပါနေပြီဆိုရင်သင့်ကိုထိဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာလိမ့်မယ် ။ အခုလိုတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံလိုက်နဲ့တော့ ။ ၃. ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ပြောခြင်း သူမရဲ့အပြောအဆိုအမူအယာကို သင်သတိထားမိလာလိမ့်မယ် ။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို ညစ်ပေပေပြောတတ်လာပြီးတော့ ချွဲတဲ့အသံမျိုးတွေပေါက်လာလိမ့်မယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လူ..သင်မကြာခင် ကံကောင်းပြီပဲ … Read more
အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅) မျိုး အမာရွတ်တွေရှိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ကစပြီး ပျော်လိုက်ပါတော့။ နှစ်ချို့နေတဲ့အမာရွတ်တွေ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ၊ ခြေထောက်က အမာရွတ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အမာရွတ်မှန်သမျှကို ပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ချို့နေတဲ့ အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅) မျိုး အမာရွတ်တွေရှိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ကစပြီး ပျော်လိုက်ပါတော့။ နှစ်ချို့နေတဲ့အမာရွတ်တွေ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ၊ ခြေထောက်က အမာရွတ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အမာရွတ်မှန်သမျှကို ပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သံပုယို သံပုယိုရည်ကို ရေအနည်းငယ်ရောလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့သံပုယိုရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့တို့ပြီး အမာရွတ်တွေပေါ်မှာလိမ်းပေးလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အထိထားပြီးရင် ရေဆေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီနည်လမ်းလေးကို လုပ်ပြီးပြီးချင်းနေရောင်အောက်ကို မထွက်ပါနဲ့။ ထွက်မယ်ဆိုလည်း နေရောင်ကာခရင်မ် လိမ်းပေးပါ။ (၂) … Read more
ညဖက်ရောက်တိုင်း လက်ဝတ်လက်စား ချွတ်အိပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတချို့ အိပ်ပျော်ရခက်ခဲစေနိုင် ဆွဲကြိုးဝတ်ပြီးညအိပ်ခြင်းက ညဖက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဟိုဖက်လှည့်လိုက် ဒီဖက်လှည့်လိုက်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်မအိပ်တတ်သူတွေဆိုရင် ဆံပင်မှာသွားငြိတာမျိုး၊ လည်ပင်းမှာလာပတ်နေတာမျိုး စသဖြင့် အိပ်ရေးပျက်စေပါလိမ့်မယ်။ ဆွဲကြိုးမှာ လော့ကတ်သီးပါတာမျိုးဆို အိပ်နေရင်းနဲ့ အသားကိုလာထိုးမိတာမျိုးဆိုရင်လည်း အိပ်ရေးပျက်နိုင်တာမို့ ချွတ်အိပ်လိုက်ပါ။ အသားအရေကိုယားယံစေနိုင် လက်ဝတ်လက်စားတွေကို ဖန်တီးပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ နီကယ်ဒြပ်စင်လို အချို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများက အလက်ဂျစ်တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အသားအရေကို နီရဲယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ရွှေနဲ့ငွေတို့က လုံခြုံမှုရှိမယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့်လည်း သူတို့အတွင်းမှာ အခြားသောသတ္တုတွေလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သင့်အသားအရေက အလွယ်တကူ အလက်ဂျစ်ဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုပါက ၁၄ ကာရတ် နှင့်အထက် ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်လက်စားများကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။ နားအဖျားပျော့တွဲတွဲဖြစ်လာနိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ နားအဖျားရဲ့တင်းရင်းမှုကလည်း တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာတဲ့အတွက် သူတို့ကိုလည်း … Read more